एमालेमाथि चो’रीको आ’रोप: माओवादीले ग’म्भिर आ’पत्ती जनाउँदै मु’द्दा हा’ल्ने तयारी !
October 5, 2021 N88LeaveaComment on एमालेमाथि चो’रीको आ’रोप: माओवादीले ग’म्भिर आ’पत्ती जनाउँदै मु’द्दा हा’ल्ने तयारी !
काठमाडाैं । नेकपा (एमाले) को विधान महाधिवेशनले पारित गरेको नयाँ लोगो वि’वादमा परेको छ । माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हसँग मिल्दोजुल्दो हँ’सिया हथौ’डा लोगोमा प्रयोग गरिएकाले माओवादी कित्ताबाट यसउपर प्रश्न उठा’इएको हो । माओवादी केन्द्रका एक नेताले आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्ह एमालेले लोगोमा प्रयोग गरेको भन्दै आप’त्ति जनाएका छन् । एमालेले यसअघि वर्गाकार कोठामा सानो साइजको […]
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देखाइन उच्च राजनीतिक संस्कार, मदनको बाटो समातेको भन्दै चाैतर्फी प्रशंसा
October 5, 2021 N88LeaveaComment on राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देखाइन उच्च राजनीतिक संस्कार, मदनको बाटो समातेको भन्दै चाैतर्फी प्रशंसा
काठमाडाैं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सोमबार साँझ ‘रिफ्रेस’ हुन भन्दै चन्द्रागिरि गएकी छन् । परिवारका सदस्यसहित चन्द्रागिरि गएकी राष्ट्रपति भण्डारी मंगलबार शीतल निवास फर्किने बताइएको छ । उनी मंगलबार भालेश्वर मन्दिरमा पूजा गरेर र लञ्च खाएर शितल निवास फर्किने कार्यक्रम छ । राष्ट्रपति भण्डारी सामान्य हिसाबले पारिवारिक भ्रमणमा गएको राष्ट्रपतिका प्रेस विज्ञ टीका ढकालले बताए […]
प्रचण्डका कारण गठबन्धन भाँडियाे, ला’ज मर्दाे बनाए भन्दै बालुवाटारमा बबण्डर !
October 5, 2021 N88LeaveaComment on प्रचण्डका कारण गठबन्धन भाँडियाे, ला’ज मर्दाे बनाए भन्दै बालुवाटारमा बबण्डर !
काठमाडाैं । भागबण्डा र स्वा’र्थमा म’रिहत्ते गरिरहेका गठबन्धनका नेताहरुबीच ट’कराव देखिएको छ । त्यही पदका लागि गठबन्धनभित्र रडाको म’च्चिएको हो । यहीकारण गठबन्धन फु’ट्ने मोडमा आइपुगेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा गठबन्धनका शीर्ष नेता चित्रबहादुर केसीले गठबन्धन छा’ड्ने सं’केत गरेका छन् । उनले भागवण्डा नमिकै कारण मन्त्रीपरिषद विस्तार ढिलो भएको भन्दै यस्तो अवस्था आउनु […]
रुक्मांगतसँग आ’त्तालिएर प्रचण्डले रातारा’त भा’गेको खु ला सा…!
October 5, 2021 N88LeaveaComment on रुक्मांगतसँग आ’त्तालिएर प्रचण्डले रातारा’त भा’गेको खु ला सा…!
काठमाडाैं । पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र तत्कालिन प्रधानसेनापती रुक्मांगत कुटुवालबारे स न स नी पूर्ण खु ला सा भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले रुक्मांगत कुटुवालसँग ड’रा ए र रा’ती घर नै छो’डे र प्रचण्ड भा’गे को खु’ला सा गरेका हुन् । प्रचण्ड पहिलो पटक […]
एमाले पार्टी होइन, ओेली रूचाउनेहरूको झुन्ड हो : भुसाल
October 5, 2021 N88LeaveaComment on एमाले पार्टी होइन, ओेली रूचाउनेहरूको झुन्ड हो : भुसाल
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का महासचिव बेदुराम भुसालले नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनमा वितरण गरिएको पानीखाने बोटलमा समेत एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओेलीको फोटो टाँसिएको प्रति टिप्पणी गरेका छन् । महासचिव भुसालले बोटलमा पनि फोटो टाँस्नु कम्युनिस्ट मर्ममाथि प्रहार गरेको र सो कामले मार्क्सवादको समेत ठाडो उलंग्घन भएको बताएका छन् । नेकपा (एस) को भक्तपुर […]
सार्वजनिक समारोहमै तत्कालिन भारतीय पूर्वराजदुत रञ्जित रेलाई ‘धोती’ भनेपछि…..
October 5, 2021 N88LeaveaComment on सार्वजनिक समारोहमै तत्कालिन भारतीय पूर्वराजदुत रञ्जित रेलाई ‘धोती’ भनेपछि…..
काठमाडौं । नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत रन्जित रेले भर्खरै ‘काठमाडौं डिलेमा रिसेटिङ इन्डियानेपाल टाइज’ नामक पुस्तक प्रकाशन गरेका छन् । उनको पुस्तकमा धेरैजसा नेपाल भारत र चीनको चर्चा गरिएको छ । पुष्तकमा त्यो भन्दापनि बढी नेपाल भारतसम्बन्ध र आफ्नो कार्यकालमा नेपालका नेतृत्व तहका नेता तथा पूर्वपूधानमन्त्रीहरुको चर्चा पनि समेटिएको छ । पूर्वराजदूत रेले नेपालको पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु […]
प्रचण्डमा यु’द्धकै धङधङी फेरि यु’द्धका कुरा किन ? कस्तो यु’द्ध चाहन्छन् प्रचण्ड ?
October 5, 2021 N88LeaveaComment on प्रचण्डमा यु’द्धकै धङधङी फेरि यु’द्धका कुरा किन ? कस्तो यु’द्ध चाहन्छन् प्रचण्ड ?
काठमाडौं । सशस्त्र यु’द्धको उपलब्धीस्वरुप दुईदुई पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सत्ताबाहिर हुँदा अक्सर नयाँ यु’द्धको कुरा गर्नुहुन्छ । तर यसपटक भने सत्तारुढ गठबन्धनमै बसेर प्रचण्डले यु’द्धको कुरा निकाल्नु भएको छ । सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै बोल्नु हुन्छ कि प्रचण्ड फेरि यु’द्ध नै चाहनुहुन्छ ? ४२ वर्षको उमेरमा ज’नयु’द्ध […]
बाह्य पर्यटक नभित्राउने बारे अष्ट्रेलियाले गर्याे यस्ताे निर्णय
October 5, 2021 N88LeaveaComment on बाह्य पर्यटक नभित्राउने बारे अष्ट्रेलियाले गर्याे यस्ताे निर्णय
काठमाडाैं । अष्ट्रेलियाले अर्को वर्ष (२०२२) सम्म बाह्य पर्यटकहरूलाई नभित्राउने भएको छ । प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले बताए अनुसार कुशल आप्रवासीहरू र विद्यार्थीहरूलाई अष्ट्रेलिया प्रवेशमा भने उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । अष्ट्रेलियाले आजसम्म १६ वर्ष माथिका ८० प्रतिशत जनतालाई कोभिड विरुद्धको दोस्रो मात्राको खोप लगाइसक्ने जनाएको छ । गत हप्ता प्रधानमन्त्री मोरिसनले खोप लगाएका नागरिक र स्थायी बासिन्दालाई […]
मातृका यादवकाे कुबुद्धि – मधेसमा विवाह गर्ने उमेर घटाऊ, लिभिङ टुगेदरलाई कानुनी मान्यता देउ
October 5, 2021 N88LeaveaComment on मातृका यादवकाे कुबुद्धि – मधेसमा विवाह गर्ने उमेर घटाऊ, लिभिङ टुगेदरलाई कानुनी मान्यता देउ
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद मातृका यादवले लिभिङ टुगेदरलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा भएको छलफलमा सांसद यादवले लिभिङ टुगेदरलाई दर्ता गर्नुपर्ने बताएका हुन् । लिभिङ टुगेदरको पनि दर्ता गरियोस् । यो अस्थायी बिहे हो । चोरी(चोरीकन बस्छन् र अपराध हुन्छ । यी विषयहरूलाई क्लियर गर्नुपर्छ, उनले […]
सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङसहित एक दर्जन प’क्राउ
October 5, 2021 N88LeaveaComment on सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङसहित एक दर्जन प’क्राउ
काठमाडाैं । सिभिल ग्रुप, सिभिल सहकारी तथा सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङसहित एक दर्जनलाई प्र’ह’रीले प’क्रा’उ गरेको छ। सोमबार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले तामाङसहितलाई प’क्रा’उ गरेको हो। ब्युरो स्रो’तका अनुसार तामाङसहितका व्यक्तिलाई सिभिल सहकारीका निक्षेपकर्ता ठ’गी गरेको अ’भि’योग छ। तामाङ संविधान सभामा एमालेका तर्फबाट सभासद पनि थिए। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक धीरजप्रताप […]